Sharciyada Cusub ee Qaxootiga Sweden filayaan Sanadka cusub Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaSharciyada Cusub ee Qaxootiga Sweden filayaan Sanadka cusub
Sharciyada Cusub ee Qaxootiga Sweden filayaan Sanadka cusub
December 18, 2020 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden, Warka ugu akhriska badan 1
waxaa bilaabanaya fasaxyada wadanka Sweden iyadoo la filayo sanadka cusub ee 2021 oo ay naga xigto mudo 12 maalin oo kaliya.
Sanad walbo Dowlada Sweden waxay soo kordhisaa Sharciyo Cusub kuwaasi oo horay u jirin halka ay isbadal ku sameyso kuwa horay u jiray.
Halkan ka dhageyso isagoo Cod ah warbixintan
Sharciyada Sanadkan la filayo ayaa ah kuwa Dowlada iyo Xisbiyada ay hada dood adag ka yeelanayaan halka kuwa horay u jiray durba la shaaciyay in isbadal lagu sameeyo hadii markaasi Barlamaanka isku raaco.
Sida Xisbiyada kasoo horjeeda dowlada ay shaaciyeen waxaa muuqata in Sharciyada sanadkan ay xiiso gooni ah wataan marka la eego aafada Corona oo isbadal weyn ku sameeyay qorshaha dowlada.
Warbaahinta Somaliska.com ayaa soo koobeysa Sharciyada la filan karo iyo kuwa horay u jiray ee isbadalka lagu sameen karo.
1 Sharciga ku meel gaarka
Sharciga ku meel gaarka oo lasoo saaray 2015 ayaa ah sharciyada ay u badan tahay in dowlada isbadal ku sameeyso si dad badan culeyska looga qaado waxana isbadalka lagu sameyn karo kamid ah deganaanshaha ku meel gaarka ee 3 sano in laga dhigo mid rasmi ah ama in dadka loo fududeeyo sharuudaha hada ku gadaaman sharcigaasi si qofka loo seeyo midka rasmiga.
2 Qoysadka kala maqan
Qodobkan waa qodobka ugu adag ee Dowlada iyo Xisbiyada badankooda ku kala aragti duwanyihiin lakin sadaasha Somaliska.com iyo xogaha aan heleeno waxay muujinayaan in Qodobkan ay dowlada ku guuleysato isla markana la fududeeyo isku imaatinka ama mideynta dadka kala maqan iyadoo meesha laga saarayo badankood sharuudaha maanta la hordhigo qofka la midoobaya qoyskiisa ee kala maqanyihiin. Fiiro gaar ah Sharciga jiray wixii ka horeeyay 2015 kaasi waxaa macquul ah in sidiisa uu ahaado. ogow in markasta uu qof walbo leeyahay kiis u gooni ah kaasi oo hay’ada Socdaalka ku heesato si dalabkiisa loogu fududeeyo.
3 Caruur isku keenista iyo Sharciga Cusub.
kani waa sharci cusub oo horay u jirin lakin sanadka cusub la filayo waxaana uu la xiriira Caruurta tusaale ahaan Hooyo ama Aabe ayaa dacwad u furay caruur uu dhalay oo ka kooban 5 qof inta dacwada lagu jiray waxaa qaan gaaray wiilka curadka ama gabadha Curadka markii dowlada ay ogolaatay hadaba Qofkaasi qaan gaaray waxaa loo soo qaadayaa Sweden lakin maanta waa laga soo tagaa maadama dowlada ay leedahay qofkan wuu qaan gaaray wuuna isku filan yahay.
waxaa jira Sharciyo intaasi ka badan sida Sharciga Kooxaha gangiska oo dooda ugu badan Xisbiyada ka dhex abuuray.
Qeybta 1 aad Sharciyada la filayo intaasi ayaa ku soo afjarnay qeybaha cusub la soco
Xogta u gaar ah Somaliska.com/Somaliska.net
Asc waxan idin weydin hadi qofka uqangaro wa sida uqan garay miye mise sharci cusub masobaxay mise kan hada soqorten okaliya miya mise sonqosho ayu hela